1 EarthCoin (EAC) to Zimbabwean Dollars (ZWL) today
1 EAC to ZWL
1 EAC = 0.11 ZWL at the rate on 2022-05-24 .
The cost of 1 EarthCoin in Zimbabwean Dollars today is 0.11 ZWL according to the “Open Exchange Rates”, compared to yesterday, the exchange rate remained unchanged. The exchange rate of the EarthCoin in relation to the Zimbabwean Dollar on the chart, the table of the dynamics of the cost as a percentage for the day, week, month and year.
2 EAC to ZWL
3 EAC to ZWL
0.11 ZWL 0.22 ZWL 0.34 ZWL
Graph of change in 1 EarthCoin to Zimbabwean Dollars rate
Dynamics of the cost changes of 1 EarthCoin (EAC) in Dollars (ZWL)
Compare the cost of 1 EarthCoin in Zimbabwean Dollars in the past with the current price at the moment.
December 29, 2020 Tuesday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
December 30, 2020 Wednesday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
December 31, 2020 Thursday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
January 1, 2021 Friday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
January 2, 2021 Saturday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
January 3, 2021 Sunday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
January 4, 2021 Monday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
The cost of 1 EarthCoin (EAC) in Zimbabwean Dollars for a week (7 days) remained unchanged.
December 5, 2020 Saturday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
The cost of 1 EarthCoin (EAC) in Zimbabwean Dollars for a month (30 days) remained unchanged.
January 5, 2020 Sunday 1 EAC = 0.11 ZWL - -
January 4, 2021 Monday 1 EAC = 0.11 ZWL -0.0000000003 ZWL -0.00000031%
The cost of 1 EarthCoin (EAC) in Zimbabwean Dollars for a year (365 days) decreased by -0.0000000003 ZWL (zero dollar three cents).